itheyibhile pa shop ukukhetha ngexesha nokuba kuvulwe
トップページ ＞ 言語 ＞ コーサ語 ＞ itheyibhile pa shop ukukhetha ngexesha nokuba kuvulwe
Ngomhla wokuqala imini replacement Xintai, ukuze idatha nayo hayi, kuba urhulumente ulwazi akukho, ukuba Neraiuchi ukukhetha iqonga yinto enzima. Xintai ngosuku lokuqala, oko akuthethi ukuba vula kusasa, uya kuvulwa ukususela xa imvume kwamapolisa phantsi. Ngenxa yesi sizathu, kule nto ukucima ukuvulwa xesha, sasidla nesendlu pa une iLotto. Ukongeza, kuxhomekeke indlela lotto, nceda uqaphele ukuba kukho kwakhona ityala nokuba hit apho Xintai andazi.
Xintai replacement ngosuku lokuqala, kuba akukho ixesha elaneleyo lokufunda lonke isikhonkwane, shiya kwicandelo apho ukukhangela, nawe nje into yokuba ekuqaleni isikhonkwane luwise inkaba. Kakade ke, ukuba sele iqokelelwe i data kwi loo site data Robo Zisixhenxe, igagasi Horukon sentlalo kunye ROM mandithathe kwi-akhawunti leyo.
Noko ke, ujonge lolungelelwaniso isikhonkwane, ukuze ukutsala abathengi, kuba yeyona isikhonkwane ilungileyo sweet Xintai replacement ngosuku lokuqala.
njengoko Horukon iseti kunye hlengiso kuzipho Xintai livulekile ngosuku lokuqala yeyona ilungileyo, kukho umkhwa uza angakhululeki suku ngalunye. Kakade ke, oko kuxhomekeke evenkileni. Ukususela ngosuku lokuqala, iindwendwe abahlanganisele Adede kum, ezinye ezivenkileni ukuvumela ngokukhulula bagcina, kukho kwakhona iqela ivenkile ngaphandle kosuku lokuqala kuba ndifuna kuqala ibe nempembelelo. Le ndawo ke, Ukuthanda malunga kweveki ngoko nangoko emva ukuvulwa kwakhona kuya kuba ngcono ukuba ujonge yonke imihla.
ngexesha zokuvulwa kunjalo, ezifana nevenkile station, ekubeni kulindeleke ukuba abathengi baninzi ukuxinana, oko kwangaphambili sokuhlolwa nezoviwo sijolise itafile ukususela kusuku oludlulileyo ukuba isiqinisekiso se data kubukeka umntu olungileyo lowo wafunda elithile .